Global Voices teny Malagasy · 2 Febroary 2011
02 Febroary 2011
Tantara tamin'ny 02 Febroary 2011
Ejipta: Mpanao fihetsiketsehana mpomba an'i Mubarak! Marina ve!?
Nanafika ireo mpitolona tany amin'ny Kianja Tahrir, any Ejipta, izay nangataka ny fialàn'i Mubarak ireo jiolahimboto miaro an'i Mubarak. Indreto ny fanehoan-kevitra voalohany avy amin'ireo Ejiptiana nanatri-maso ny loza nitranga.
Libanona: Tolona ho fanohanana an'i Ejipta
Misy fihetsiketseha ho fanohanana ireo mpitolona any Ejipta, atao eo akaikin'ny Masoivoho Ejiptiana any Beirut, Libanona. Heno koa ny momba ny fihetsiketsehana mitovy amin'izany maeran-tany, oho ireo Ejiptiana manohy mivory manohitra ny fitondràna 30 taona an'ny filoha Hosni Mubarak.
Sina: Faneriterena sivana avy amin'ny sehatra tsy miankina
Shina02 Febroary 2011
Tsy zoviana intsony fa tsy maintsy manaraka ny fepetra fanivànana avy amin'ny fahefam-panjakàna samihafa ireo mpamatsy aterineto any Sina. Na izany aza, miaraka amin'ny fisondrotan'ny orinasa tsy miankina mifandray betsaka amin'ny vahoaka, misy faneriterena be tsy mitsaha-mitombo amin'ny sivana avy amin'ny sehatra tsy miankina. Ny sasany amin'ireny mandoa vola amin'ireo...
Ejipta: Mivàntana avy ao Cairo
As thousands of Egyptians march from Tahrir Square, to call for an end to president Hosni Mubarak's 30-year rule, the world cheers on. Despite a total Internet blackout, reports continue to pour in. Here is the latest selection of 140 character Raha an'arivony ireo Ejiptiana no manao diabe avy any...